Iihotele zeDacke | Tyelela uHultsfred
ekhaya » yokuhlala » hotel » Ihotele iDacke
IHotell Dacke yihotele yosapho esembindini eVirserum. Ecaleni kwehotele kukho ipaki enkulu yemoto. Ukusondela kuwo omabini amahlathi kunye nechibi. Indawo yokutyela kunye nehotele zinamalungelo apheleleyo.
Isidlo sasemini ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu.
ISkolgatan 1, 570 80 IVirserum, Sverige
188 uphononongo kuGoogle
5/5 kwinyanga ephelileyo
Ukutya kulunge kakhulu..kwaye kuyakhawuleza ... kunye nomnini omangalisayo..plus plus ..
1/5 3 kwiinyanga ezidlulileyo
Akukho kuhlala ehotele. Ngombulelo. Nditsalele umnxeba ndaza ndabuza ukuba kungekudala ndingathatha ibhokisi nini namhlanje. Ndayifumana ke impendulo, andinakuphendula ngoku, wakhwela kwaye akakwazanga ukugcina ibhayisekile kunye nendoda, emva koko waxhoma ucingo. Inokuba yile nto kufuneka uyenze, mhlawumbi iJorma. Unokufumana ukutya kwakho kweJxxxa
UPeter Ron Boström (ForPeteSakeShow)
Indawo mhlawumbi ibone iintsuku ezingcono, zigugile kwaye zisezantsi. Iindonga ezinamagqabi ukuze ezinye iindwendwe zive kakuhle, iitawuli zazinzima kakhulu, izitya zazimdaka kwindawo yokutyela kwaye isidlo sakusasa sasehotele sasiyintlekisa. Ndijonge nje ukuba ngumfana osebenza apho ke akukho nkonzo ukuba upheka ekhitshini. Isebenza njengesisombululo esingxamisekileyo kubusuku obunye kodwa ayizukucebisa.
4/5 5 kwiinyanga ezidlulileyo
Ndindwendwele indawo yokutyela, ebikhonze i-schnitzel yaseSweden ebalaseleyo, nangona bekusebusuku kakhulu ngolwesiHlanu kwaye bendindona ndedwa ngoku. Abarhanelwa basebenzise bahlala ibheyile, ngendlela efanayo nakwezinye iindawo ezininzi zelizwe ngobusuku bangoLwesihlanu. Njengoko benditshilo: ukutya okulunge ngokugqibeleleyo, wamkelekile - kodwa undwendwelo lukwenza ubonakalise ngemeko yokuqhuba indawo yokutyela encinci yedolophu ... iinkwenkwezi ezi-4 inye kakhulu, kodwa eyokugqibela iphelela apho kuba kuphela kwayo indawo evulekileyo inikwe ukutya. Ngethamsanqa mna!
3/5 4 kwiinyanga ezidlulileyo
Kulindwe ixesha elide ukutya malunga. Imizuzu engama 50. Kodwa xa siyifumene ibiphekiwe kakuhle kwaye intle.